Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ada IOM oo Kahadashay Qoxootiga Badan Ee Itoobiya.
Hay’ada IOM oo Kahadashay Qoxootiga Badan Ee Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ February 11, 2018
Hay’ada socdaalka aduunka IOM ayaa sheegtay qaxa iyo kala firxadka shacabka kudhaqan Itoobiya uu gaadhay heer aan laqiyaai karin, waxayna hay’adu sheegtay in uu qoxootiga ree Itoobiya siibadanayo marba marka kadambaysa.
Hay’ada IOM oo warbixin dheer arintan kaqortay ayaa sheegtay in 25 dhalinyaro ah oo Itoobiyaan ah ay kudhinteen todobaadkan bada udhaxaysa Soomaaliya iyo Yemen, halkaas oo ay doonayeen in ay utahriibaan wadamada dibada.
Sidoo kale hay’ada ayaa xustay in 55 dhalinyaro ah oo Itoobiyaan ah ay soo masaafurisay todobaadkan dowlada Malawi, iyadoo ku eedaysay in ay wadankooda sharci daro kujoogeen, isla markaana aysan soomarin nidaamkii loobaahnaa.
Dhinaca kale wadanka wadanka Muizenberg ayaa xabsiyada dhigay in kabadan 300 oo qof oo dhalinyaro Itoobiyaan ah kuwaas oo doonayay in ay wadanka Koonfur Afrika tahriib ahaan kugalaan, waxaana gacanta kudhigay ciidanka amaanka ee wadanka Muizenbeg.
Sidoo kale waxaa wadanka Koonfur Africa kunool kumanaan shacab Itoobiyaan ah kuwaas oo dhamaantood kuusheegaya in ay kasoo qaxeen dhibaatooyinka nolol iyo amaan la’aanta ah ee wadanka Itoobiya kajira.
Wadanka gumaysiga Itoobiya ayaa noqday meel lagu kala yaaco, waxayna hay’ada socdaalka aduunka IOM xaqiijisay in ay maalinkasta wadankaas kasoo firxadaan boqolaal qof oo usocda meelo kala duwan.